နိုက်ထရိုဂျင်ပြproblemနာကဘာလဲ၊ လယ်သမားတွေဘာကြောင့်ညည်းညူတာလဲ၊ အဘယ်ကြောင့်မြန်နှုန်းလျှော့ချတာလဲ။ : Martin Vrijland
နိုက်ထရိုဂျင်ပြproblemနာကဘာလဲ၊ လယ်သမားတွေဘာကြောင့်ညည်းညူတာလဲ၊ အဘယ်ကြောင့်မြန်နှုန်းလျှော့ချတာလဲ။
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ72019 အပေါ်	• 11 မှတ်ချက်
ဒါဟာတကယ့်ဘေးကြီးဖြစ်ပုံရတယ်။ လယ်သမားအားလုံးရုတ်တရက်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။ ထိုနိုက်ထရိုဂျင်ဟူသောစကားလုံးသည်သူမ၌သူတော်စင်စကားလုံး '' suffocate '' ရှိပြီးသား ဖြစ်၍ လမ်းပေါ်ရှိသာမန်လူတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်တို့အားဟန့်တားနေသောအရာတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆံနေသည်ဟုထင်မြင်စေသည်။ ယူဆရသူအများစုသည်ထိုစကားလုံးကို CO2 နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ခြားနားချက်ကိုမူမသိရှိရသေးပါ။ နိုက်ထရိုဂျင်သည်သဘာဝတွင်အခြေခံအားဖြင့်အမှုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် 'နိုက်ထရိုဂျင်' ဟူသောဝေါဟာရသည်သဘာဝတွင်သာတွေ့နိုင်သောအက်တမ်တစ်ခုကို (မော်လီကျူးကဲ့သို့) ရည်ညွှန်းသည်။ ဒါကြောင့်လယ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ကိုအမှန်တကယ်လျှော့ချလို့မရပါဘူး။ ဥပမာသင်သည်အမိုးနီးယားကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အမိုးနီးယားNH₃ကိုတိုင်းတာ။ ရသောဥပမာအားဖြင့်နွားမစင်များမှတွေ့ရှိရသည်။ ပြည်နယ်သည်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုလျှော့ချရန်တစ်ခုခုလုပ်လိုသည်မှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့သူပုန်အဆင့်တွင် NLP (Neuro Linguistic Programming) ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်လျှော့ချခြင်းသည်လုံးဝဘာမျှမဆိုလိုပါ။ ဘာကိုလျှော့ချလဲ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့, အမိုးနီးယား of များစွာသောအခြားတ္ထုများထဲကတစ်ခု သောဒြပ်စင်နိုက်ထရိုဂျင်ဖြစ်ပေါ်ရသော?
နိုက်ထရိုဂျင်ကိုပုလင်းအတွင်းရှိဖိအားမြင့်အောက်ရှိနိုက်ထရိုဂျင်ကိုသင်ကောင်းစွာသိကောင်းသိလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုလက်အိတ်ထူထပ်စွာ (သို့မဟုတ်သီးခြားပုလင်းမှဓာတ်ပုံကဲ့သို့) သွန်းလောင်းရန်လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာသင်၏လက်ချောင်းများသည်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ (N2) မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကြွက်နို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဥပမာအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်သည်ဖိအားမြင့်ပုလင်းထဲမှထွက်လာသည်နှင့်ချက်ချင်းပြုတ်ထွက်သွားသည်။ ၎င်းသည်အပူချိန် -195,8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပြီးနိုက်ထရိုဂျင်အရည်သည်အပူချိန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သည်အလွန်အေးသောကြောင့်ချက်ချင်းလေထုထဲတွင်အငွေ့ပြန်သည်။ ခိုင်ခံ့သောသံမဏိပုလင်းများတွင်မြင့်မားသောဖိအားအောက်တွင်ထားခြင်းသည်၎င်းကိုအရည်ဖြစ်စေသည်။ ဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေပါ။
CO2 ကိုလျှော့ချရမယ်ဆိုတာသိပြီးသား။ CO2 သည်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ (N2) နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ CO2 ဆိုသည်မှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒီစကားလုံးကိုဒီပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် - di-oxide 2x အောက်စီဂျင်ကိုဆိုလိုတယ်။ အောက်စီဂျင်အက်တမ်နှစ်ခုပါသောကာဗွန်အက်တမ်တစ်ခုနှင့်၎င်းကိုတွဲထားသည်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ကာဗွန်အက်တမ်များပါဝင်သောလောင်စာကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီနှင့်ဒီဇယ်အားလုံးတွင်ကာဗွန်အက်တမ်များပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်လောင်စာမော်လီကျူးသည်အခြားအရာများအပြင်ကာဗွန်အက်တမ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ လေထဲတွင်လောင်သော (အောက်ဆီဂျင်၊ O2 ဓာတ်ငွေ့) ဖြစ်သည့် CO2 သည်အပြည့်အဝလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြင့်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO) ကိုမလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံအိမ်တွင်းရှိဓာတ်ငွေ့အပူပေးစက်များတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထဖြစ်ခြင်းကြောင့်တခါတရံအူများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ထိုတွင်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် CO2 အကြားသိသာထင်ရှားသည့်ဆက်နွယ်မှုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်နှစ်ခုလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုလုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
အကယ်၍ လယ်သမားများသည်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်ပါကအဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းစွာမရှင်းလင်းနိုင်သည့်အရာတစ်ခုကိုလျှော့ချရမည်။ အကြောင်းမှာလယ်သမားများသည်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုမထုတ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သည်အများဆုံးတွေ့ရသောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီးလေထု၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏ 78,1% ရှိသည်။ အခြားအက်တမ်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သောအက်တမ်တစ်ခုကိုသဘာဝတွင်တွေ့နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဥပမာအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ (O2) (သို့) ရေထဲ၌ဖြစ်လျှင် (O2O) အောက်စီဂျင်အက်တမ် (O) ကဲ့သို့။ နိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများသည်လေထုနှင့်သက်ရှိများအကြားအဆက်မပြတ်ဖလှယ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ကိုအများအားဖြင့်အမိုးနီးယားကိုအပင်များသုံးနိုင်သောပုံစံဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးပြုပြင်ခြင်း (သို့) ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ အမိုးနီးယားသည်လယ်သမားများ (အနည်းဆုံးသူတို့၏တိရစ္ဆာန်များ) ထုတ်လုပ်သည့်အရာဖြစ်သည်။ အမိုးနီးယားသည်အပင်များအတွက်အသုံးဝင်ပြီးအသုံးဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်လယ်သမားများသည်သူတို့၏မြေပေါ်တွင်ဓာတ်မြေသြဇာဖြန့်ဝေကြသည်။
အမိုးနီးယားကိုအပင်များကစုပ်ယူသောအခါပရိုတိန်းများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်ထိုအပင်များကိုပရိုတင်းများနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ပါသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အမိုးနီးယား) ကိုထုတ်ယူရန်အတွက်နိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအသုံးပြုသောတိရိစ္ဆာန်များမှအစာကြေသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤသက်ရှိများသည်သေဆုံးခြင်းနှင့်ပြိုကွဲခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့် denitrification ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအခမဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ (N2) ကိုလေထုထဲသို့ထုတ်လွှတ်သည်။ တစ် ဦး ကအံ့သြစရာအသုံးဝင်သောနှင့်လိုအပ်သောသံသရာ။
CO2 ကဲ့သို့ပင်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှင့် ပတ်သက်၍ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်များမရှိပါ။ တကယ်တော့နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သည် 'inert' gas ဖြစ်ပြီးသဘာဝအားဖြင့်အခြားတ္ထုများနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများတွင်မပါဝင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ကင်းသော၊ အဆိပ်မရှိသော၊ အနံ့မရှိသောကြောင့်၎င်းကိုတစ်နေ့လုံးရှူရှိုက်မိသည်။ အောက်စီဂျင်လိုပဲ CO2 ၏စုပ်ယူမှုကြောင့်သစ်ပင်များမှထပ်မံထုတ်လုပ်သောအောက်စီဂျင်။ CO2 နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှစ်မျိုးလုံးသည်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ငွေ့များ ဖြစ်၍ နိုင်ငံရေး (ယခုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအုပ်စုများ) က၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ အကြောင်းမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစိုးရများကသိပ္ပံပညာရှင်များအားပုံပြင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစေရန်အပေးအယူလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပူနွေးသောကာလများအတွင်းလေထုထဲတွင် CO2 ပိုမိုများပြားလာကြောင်းပြသနိုင်သည့်အစီရင်ခံစာများအရ CO2 သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်နှင့်လူတိုင်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုခြေရာခံနိုင်သည့်စနစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ရာ၌သိပ္ပံမှော်အတတ်၏မျက်မြင်သက်သေများဖြစ်သည်။
2015 မှစ၍ လယ်သမားများကို PAS (နိုက်ထရိုဂျင်ချဉ်းကပ်မှုအစီအစဉ်) တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်၏ဆန္ဒပြမှုများကိုတွေ့မြင်ရပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရန်ခက်ခဲသောသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်သည့်လိုအပ်ချက်များချမှတ်ခြင်းကြောင့်ဒေဝါလီခံလယ်သမားများကို ဦး တည်သည်။ မနေ့က Mark Rutte သည်လယ်သမားများ၏စကားကိုနားထောင်သည် (သိုးမွှေးစကားပြောပြီးဘာမှမလုပ်သည်) သည် Groningen ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ယူမှုနှင့်ရလဒ်များဖြစ်ပေါ်စေသောငလျင်များနှင့်တူသည်။ လူများကိုရေငတ်စေ။ Rutte သည်ဒတ်ခ်ျပြည်နယ်၏ကွန်ယက်တစ်ခုတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်ကို သိ၍ ထိုကဲ့သို့သောလယ်သမားများအစည်းအဝေးသို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်သွားနိုင်သည် pawns အလုပ်အကိုင်တိုင်း၊ Inoffizieller Mitarbeiter ၏ကွန်ယက်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအလွှာအသီးသီးရှိအတိုက်အခံများကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို '၀ န်ကြီးချုပ်' ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သူသည်စစ်မှန်သောတိုက်ခိုက်မှုများကိုကြောက်စရာမလိုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စိတ်ဆင်းရဲမှုအားလုံးမှလွတ်မြောက်လာသောလယ်သမားများသည်ဤအုပ်စုထဲတွင်လည်းပါဝင်နိုင်ပြီးတိတ်ဆိတ်စွာနေလိမ့်မည်။
နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုင်းတာလို့မရဘူး၊ နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်လွှတ်နေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးဆိုရင်မင်းမှာပြproblemနာရှိနေတယ်။ ဥပမာ၊ နွားတစ်ကောင်သည်သူခဏခဏနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်လွှတ်သလား။ ဟင့်အင်း၊ ဆီးနှင့် poo တို့တွင်နိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများရှိသော်လည်းနွားမသည်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံလယ်သမားများသည်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုအသုံးပြုသည်။ ဥပမာ - မြက်ပင်ပေါက်ခြင်း၊ အသီးသိုလှောင်ခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ရန်၊ သို့သော်ယင်းသည်များစွာမပြောထားသည့်အပြင်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သည်အန္တရာယ်ကင်းပြီးကောင်းမွန်သောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တောင်သူများအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်နိုက်ထရိုဂျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့အတွက်ပြည်နယ်ကဆုံးဖြတ်ပေးသောတွက်ချက်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုရရှိရမည်။ အဆုံး၌အကြောင်းဖြစ်ထွက်လှည့် အမိုးနီးယား ထို့ကြောင့်ချေးနှင့်ဆီး၌ရှိသောအရာသည်။ နိုက်ထရိုဂျင် ဝါဒဖြန့်ချိရေးအကြောင်းပြချက်များနှင့်မြင့်မြတ်သောပရိုဂရမ်များအတွက်ရွေးချယ်ထားသောစကားလုံးတစ်လုံးအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည် "မင်းတို့အသက်ရှူကျပ်တယ်" ဘာလို့မဖြစ်တာလဲ အမိုးနီးယားလေထုညစ်ညမ်းမှု ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကျနော်တို့အသက်ရှူကျပ်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးသောနာမတော်ကိုအမှီပြု။ အမြဲတမ်းပါသလား ရှင်းပြသည်မှာ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်“ သူတော်စင်ပရိုဂရမ်” ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
သရုပ်ဆောင်အသင်းအဖွဲ့၏နောက်ဆုံးအစီအစဉ်များမှာဟဂ်ျသည်လမ်းများပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်။ အခြားအရာတစ်ခုခုရှိသေးသလော သင်ဆဲရသေးလား လယ်သမားအနည်းငယ်သာရှိသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများပိုမိုတည်ဆောက်လိုသောကြောင့်လမ်းများပေါ်ရှိအမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြည်နယ်သည်ယာဉ်ကြောဒဏ်ငွေများအတွက်ဘီလီယံနှင့်ချီ။ အပိုဆောင်းသုံးစွဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှုတိုင်းတွင်ယုတ္တိဗေဒတိုင်းပျောက်နေသည်။ သာမန်အရာဝတ္ထုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အူအတွင်းခံစားမှု (သို့) ကုန်းပေါ်သို့တက်ခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာယုတ္တိဗေဒနှင့်အကြောင်းအရာအကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး; မီဒီယာ၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလောကမှာအရာအားလုံးကအဓိကပါပဲ အူခံစားချက်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ၎င်းမှာလူတိုင်းသည်ငွေအမြောက်အများထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည် (သို့မဟုတ် (လယ်သမားများကဲ့သို့) ရိုးရှင်းစွာဒေဝါလီခံခြင်းဖြစ်သည်။
Shell, မင်းမင်းမိသားစုသိသာထင်ရှားသည့်ဝေစု (လှပသောဆောက်လုပ်ရေးအမျိုးမျိုးနောက်ကွယ်မှကွယ်ဝှက်ထားသည့်) ကုမ္ပဏီကို 2009 နိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏လောင်စာထည့်ရန်။ ဒါကအင်ဂျင်ထုတ်လွှတ်မှုတွေကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ပါ။ တကယ်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်ဖြစ်ပုံရသည်။ ရေနံကုမ္ပဏီများကထိုပြtoနာကိုလောင်စာဆီထဲသို့ထည့်ပြီးပြီဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ယခုအခါ Rutte အစိုးရအနေဖြင့်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ရှိ 130 မှ 100 သို့အမြန်နှုန်းလျှော့ချခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ နယူးယောက်ရှိ Penn State တက္ကသိုလ်မှလောင်စာသိပ္ပံ၊ ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာပါမောက္ခအန်ဒရီအယ်လ်ဘိုဟမ် (ယခုသူဖြစ်လာမည့်သူ) သည်နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် 2009 တွင်တင်ပြပြီးပြီ
နိုက်ထရိုဂျင်ကြွယ်ဝသောလောင်စာများကိုခဏအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူက "နိုက်ထရိုဂျင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း" ဟူသောဝေါဟာရသည်ထပ်ဆင့်ဓာတုဗေဒကိုမသိသောသာမန်လူအားဘာမျှမပြောတတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောင်စာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါမေးတာက "ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကနိုက်ထရိုဂျင်ကိုဘာကြောင့်ပေါင်းထည့်တာလဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် NOx ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးပွားစေလို့ပဲ။"
ထို့ကြောင့်နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်သောဒြပ်ပေါင်းများကိုလောင်စာဆီများသို့ပေါင်းထည့်ခြင်းကအဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အဖြေကိုထိုနေရာတွင်ရှာရမည်။ လောင်စာဆီတင်သူများနှင့်; ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာသောနန်းတော်တွင်နေထိုင်ပြီးဒီမိုကရေစီဟုခေါ်တွင်သည့်အခွန်အခများကိုပေးဆပ်ရသောထိုမိသားစုမှဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ။ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသင်သိသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများကိုဖယ်ရှားပါ။
Jeroen Pauw နှင့်အခြားအမြင်စီမံခန့်ခွဲမှုတီဗီအစီအစဉ်များမှငှားရမ်းထားသည့်ကျွမ်းကျင်သူများကထောက်ခံသောဝါဒဖြန့်ချိမှုအပေါ်တွင်သာ အခြေခံ၍ တိုင်းတာသည်။ ခိုင်လုံသောဝေဖန်မှုများသို့မဟုတ်ခိုင်လုံသောသိပ္ပံဆိုင်ရာအခြေခံအုတ်မြစ်မရှိပါ။ အကယ်၍ ဝေဖန်မှုများရှိပါက၊ ဆင်ဆာသည်လူတို့အားယင်းကိုမမြင်တွေ့နိုင်အောင်သေချာစေသည်။ ၎င်းသည်အူများခံစားမှု၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သောပရိုဂရမ်များနှင့်သင့်ကိုသိုးမွှေးဖြင့်သိုးမွှေးထဲထည့်ပေးသောလခများသောသရုပ်ဆောင်များအကြောင်းဖြစ်သည်။ ကျနော့်အမြင်အရလယ်သမားများအတွက်နိုက်ထရိုဂျင်လိုအပ်ချက်သည် landjepik နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ပြည်နယ်သည်လယ်သမားများအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်အချို့ဒေဝါလီခံကြပြီးသူတို့၏လယ်သမားအိမ်နီးချင်းများကမြေယာကိုသိမ်းယူနိုင်ပြီးကျန်ရှိသောမြေများကိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများအတွက်ပြည်နယ်သို့သွားနိုင်သည်။ အများဆုံးအမြန်နှုန်းကျဆင်းနေခြင်းကြောင့်အခြေခံအဆောက်အအုံသစ်များနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သည့်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ (ဒဏ်ငွေမှ) ရရှိလိမ့်မည်။ လယ်သမားအနည်းငယ်ပုလင်းထဲသို့ ၀ င်သွားခြင်းကပြည်နယ်အားရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဤလယ်သမားများသည်အိမ်နီးချင်းနှင့်အတူအစေခံများအနေနှင့်ကောင်းမွန်စွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ကြသည်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာငွေကြေးနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည်ဥရောပ၏ကျန်ဒေသများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်စမ်းသပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
source link ကို entries တွေကို: nytimes.com
လယ်သမားများဆန္ဒပြခြင်း - လယ်သမားများကသင်၏ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်များသည်လျှို့ဝှက်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်
မီဒီယာဇာတ်ညွှန်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့သော PSYOP စစ်ဆင်ရေးရောင်းတီဗီရှိုးနှင့်အတူဖွစျသှားသလဲ
ရောဘတ် Jensen တို့က Jensen.nl နယ်သာလန်များအတွက် Infowars ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုမဟာဗျူဟာ?
Tags:: 100%, 130, ချဉ်းကပ်နည်း, အမိုးနီးယား, လယ်သမားများ, CO2, အထူးပြုလုပ်ထားသော, အများဆုံး, ဒတျချြ, မရှိကြောင်းအလေး ထား., အစီအစဉ်, ဆန္ဒပြပွဲများ, မြန်နှုန်း, အဝေးပြေးလမ်းမ, နိုက်ထရိုဂျင်
Matthijs ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး wrote:
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 14: 13
လယ်သမားများက“ ဒီအပူချိန်ကကောင်းလာပြီးခရမ်းရောင်ကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်နိုက်ထရိုဂျင်သိပ်များလွန်းနေတယ်။ နိုက်ထရိုဂျင်လည်းများများစားစားရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘာကဖော်ပြသလဲ။ သို့မဟုတ်အမိုးနီးယားများလွန်းသဖြင့်မြေဆီလွှာအားအက်စစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသလား။ နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ဤမျှလောက်မ? သို့သော်ထို့နောက်အဆက်မပြတ်ပြန့်ပွားခြင်းမကောင်းဘူး။ သင်၌နိုက်ထရိုဂျင်ဟူသောဝေါဟာရသည်မမှန်ကန်ပါကသင်၌အမှတ်မရှိသလော။
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 14: 23
သင်ပြောနိုင်သည်မှာ“ အလွန်အကျွံ” ဆိုသောအရာအားလုံးသည်မသင့်တော်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်းနိုင်ငံရေးအစီအစဉ်သည်အဓိကအားဖြင့်ငွေကြေးနှင့်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု (သို့မဟုတ်သိမ်းယူခြင်း) နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုအက္ခရာတင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူပုံရသည်။
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 14: 31
နယ်သာလန်တွင်ကျွဲနွားများစွာရှိပြီးထို့ကြောင့်မြေ and ဇာနှင့်အမိုးနီးယားထုတ်လွှတ်မှုလည်းများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မြေပေါ်သို့ကျရောက်လျှင်နိုက်ထရိုဂျင်အလွန်များများမထုတ်လုပ်နိုင်သည့်မြေဆီလွှာကိုနှစ်သက်သောအပင်များကထိုမြေဆီလွှာမှခံစားရသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ကြွယ်ဝသောမြက်များနှင့်ဆူးပင်များကဲ့သို့သောမြေဆီလွှာပေါ်တွင်ရှင်သန်ပေါက်ပွားသည့်အပင်များကအထက်သို့ကျသည်။
၎င်းသည်တရားဝင်ဟောပြောချက်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအက်ဆစ်မိုးရွာခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ "မြေဆီလွှာကိုမကောင်းတဲ့အပင်များ ... ", "မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိသောအပင်များ" .. ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် .. နောက်တဖန်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာဟူသောစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဟူသောစကားလုံးသည်တရားမမျှတပါ။ ဆောင်းပါး၏ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းနိုက်ထရိုဂျင်သည်ဒြပ်ပေါင်းများတွင်သာတွေ့ရှိနိုင်သည်။
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 15: 26
ထို့ကြောင့်တရား ၀ င်စာဖတ်ခြင်းသည်အချို့သောသဘာဝသယံဇာတများရှိအပင်များအတွက်အမိုးနီးယားသည်မကောင်းပါဟုဆိုထားသည်။
၎င်းသည်အလွန်များလွန်းခြင်းကမကောင်းကြောင်းသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်အားလုံးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်တူသည်။ လူ ဦး ရေနှင့်ဝေးကွာသောငွေများရရန်အလီဘာဘာအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်။
CO2 ဇာတ်လမ်းတွင် 'တရား ၀ င်ဟောပြောပွဲနှင့်ဆန့်ကျင်သောသိပ္ပံပညာရှင်များရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဇာတ်လမ်းကိုထောက်ခံအားပေးသူများသည်မြှင့်တင်ရေးကိုရယူခြင်း' ၏လူသိများသောနည်းလမ်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မေးခွန်းမှာဤကိစ္စသည်ဤတွင်ပင်ဟုတ်မဟုတ်လား။
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 15: 52
အမိုးနီးယားထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရန်အသားစားသုံးမှုလျှော့ချရန်ခြေလှမ်းသေးသေးလေးဖြစ်သည်။ လူတွေဘယ်လောက် ၀ ယ်စား၊ ဘယ်လောက်စားလဲ၊ ဘယ်လိုစစ်ဆေးသလဲ။ 'အရာဝတ္ထုများ၏အင်တာနက်' (5G) နှင့်ခြေရာကောက်နိုင်သောသုံးစွဲမှုအားဖြင့်။ ၎င်းတွင် blockchain-based ပိုက်ဆံစနစ်နှင့်အိမ်အတွင်းရှိစမတ်မီတာများ (အဘယ်အရာကိုတိုင်းတာရန်ရေခဲသေတ္တာ၊ အထွက်တိုင်းတာသည်ကိုတိုင်းတာရန်စမတ်အိမ်သာ) လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့် "နိုက်ထရိုဂျင်" အလီဘာဘာသည် CO2 ဖောင်းပွမှုနှင့်အတူအာဏာရှင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကိုမိတ်ဆက်ရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 19: 34
အကယ်၍ လယ်သမားတစ် ဦး ကအဖြေများထွက်လာလျှင်၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ 2030 အစီအစဉ်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ယုတ္တိနည်းကျရပ်တန့်သွားသည်။ လွတ်လပ်မှုကိုကန့်သတ်ချုပ်နှောင်ခြင်းနှင့်ကျွန်တစ် ဦး ကဲ့သို့သောစိုက်ခင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း ..
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 20: 04
လှပသောဖြေရှင်းချက်။ တစ်ခါကငါ zeolites မှာလက်ကားလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပြီးတူရကီနှင့်သြစတြေးလျမှမိုင်းများမှထိုပစ္စည်းများကိုဥရောပသို့ပထမဆုံးတင်ပို့ခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ၀ ယ်သူကြီးတစ်ယောက်ကငွေမပေးချေသောကြောင့်ကုမ္ပဏီကိုကျွန်ုပ်မကယ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဒေဝါလီခံရခြင်းမှ ၀ ယ်ယူခဲ့သောပိုင်ရှင်အသစ်တွင်ကျွန်ုပ်အချိန်၌ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၌ကျွန်ုပ်ရေးထားသောစာများရှိသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ယခုအခါသန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Zeolite နှင့်အထူးသဖြင့် Clinoptilolite တို့ကအမိုးနီးယားကိုအနည်အနှစ်များမှစစ်ထုတ်ပြီးဆားရေဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ငါထောက်ပံ့သော Clinoptilolite ကိုလည်းအီးယူမှအစားအစာဖြည့်စွက်မှုအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ငါဒီကိုမြင်းခြံများနှင့်ကြီးမားသော (အလွတ်ပြေးကြက်) အိမ်များသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခု ဒါပေမယ့်လူတွေဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုမလိုချင်ဘူး၊ သူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းကိုဖြိုခွဲပြီးပိုကောင်းတဲ့ချုပ်ကိုင်မှုရချင်တယ်။
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 23: 07
သင်၏ရှင်းပြချက်ကိုမာတင်ရှင်းပြသည်။ Madurodam နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာအားလုံးသည်လူစီဖာရီယန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 21: 14
8 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 12: 17
အရာအားလုံး, အထူးသဖြင့်ဇာတ်ညွှန်းအတွက်ယောက်ျားလေးများအတွက်အရေးကြီးသောအရာ, စုံလင်ဖို့ညွှန်ကြားထားသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ 'တရားရုံးများ' တွင်တရားရုံးသို့သွားခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။
လယ်သမားတွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလောကစသည်ဖြင့်အတူတကွအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာငါနားမလည်ဘူးလား။ နက်ရှိုင်းသော၊ နက်ရှိုင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်သောအဖွဲ့အစည်းများသည် undercovers များစွာမှထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းခံရသည့်အန္တရာယ်ရှိနေသည်။ ဘယ်နိုင်ငံလဲ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင်နေထိုင်ကြသည်။
7 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 23: 31
(အခမဲ့ Incognito mode တွင်ဖတ်ရှုရန်၊ သို့သော်ထိုဒဏ်enseာရီကိုမမြင်ရန်ပိုကောင်းသည်)
« ရိုက်နှက်မှုရှေ့နေ Philippe Schol နှင့်မှားယွင်းသောပြန်ပေးဆွဲမှုအစီရင်ခံစာ Schiphol
နာဇီဂျာမနီထက်ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပိုဆိုးတယ်၊ သိုးရဲ့အဝတ်အစားမှာ ၀ ံပုလွေတစ်ကောင်လိုတွေ့လိုက်ရတယ်
Robert Jensen ၏ "Donald Trump သည်ကမ္ဘာသစ်အစီအစဉ်ကိုမယုံဘူး" ကသက်သေပြသည်။ Jensen.nl သည်အတိုက်အခံကိုထိန်းချုပ်သည်
စီးနင်းမှုများစတင်ခဲ့ပါသလား Psycholance ကို Els Borst / Bart van U. ကိစ္စတွင် အခြေခံ၍ 2018 ၌အစိမ်းရောင်အလင်းကိုပေးထားပြီးဖြစ်သည်
သရဖူသကျသခေံနှင့်ပြည်နယ်နှင့် proxy ရာဇဝတ်မှုအကြားဂိမ်း (ရှေ့နေ Meijering နှိုင်းယှဉ် Plasman)
ပထမအဆင့်မှာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့်သည်ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည် - ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းခလုတ်
မာတင် Vrijland op နာဇီဂျာမနီထက်ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပိုဆိုးတယ်၊ သိုးရဲ့အဝတ်အစားမှာ ၀ ံပုလွေတစ်ကောင်လိုတွေ့လိုက်ရတယ်
အဘယ်ကြောင့်သင်သိချင်ပါသလဲ? op နာဇီဂျာမနီထက်ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပိုဆိုးတယ်၊ သိုးရဲ့အဝတ်အစားမှာ ၀ ံပုလွေတစ်ကောင်လိုတွေ့လိုက်ရတယ်
အဘယ်ကြောင့်သင်သိချင်ပါသလဲ? op စီးနင်းမှုများစတင်ခဲ့ပါသလား Psycholance ကို Els Borst / Bart van U. ကိစ္စတွင် အခြေခံ၍ 2018 ၌အစိမ်းရောင်အလင်းကိုပေးထားပြီးဖြစ်သည်
guppy op နာဇီဂျာမနီထက်ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပိုဆိုးတယ်၊ သိုးရဲ့အဝတ်အစားမှာ ၀ ံပုလွေတစ်ကောင်လိုတွေ့လိုက်ရတယ်
Zandi မျက်လုံး op နာဇီဂျာမနီထက်ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပိုဆိုးတယ်၊ သိုးရဲ့အဝတ်အစားမှာ ၀ ံပုလွေတစ်ကောင်လိုတွေ့လိုက်ရတယ်
1.683 သည်အခြား subscriber များအား join